Andriamanitra nefa nanetri-tena! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 novembre 9, 2012 novembre 9, 2012 Laisser un commentaire sur Andriamanitra nefa nanetri-tena!
« Ary nony tonga tao Kapernaomy izy, dia nankeo amin’i Petera ny mpandray ny antsasaky ny sekely ka nanao hoe: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba mandoa ny antsasaky ny sekely va? Dia hoy Petera: Mandoa ihany Izy. Ary raha tafiditra tao an-trano Petera, dia nosakan’i Jesosy teny Izy ka nataony hoe: Ahoana ny hevitrao, ry Simona? Avy amin’iza moa no andraisan’ny mpanjaka ety an-tany fadin-tseranana sy vola hetra? Avy amin’ny zanany, sa avy amin’ny olonkafa? Ary nony hoy Petera taminy: avy amin’ny olon-kafa, dia hoy kosa Jesosy: Dia afaka ary ny zanaka. Nefa andrao isika manafintohina azy, dia mankanesa ao amin’ny ranomasina hianao, ka manjo-noa; ary raiso izay hazandrano voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo hianao; dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao. » Mat 17:24-27
Petera nanontanian’ny mpandray hetra. Raha tsorina amin’ny fiteny ankehitriny, nanontany an’i Petera izy hoe, moa mba mandoa hetra ve ny mpampianatra anareo.Petera namaly hoe, mandoa ihany Izy. Jesosy nanontany an’i Petera ny amin’ny tokony hampandoavan’ ny mpajaka hetra ny zanany sa tsia, dia namaly Petera hoe tsia.
Jesosy dia zanak’Andriamanitra lahy Tokana, ary Tsy andriamanitra tsotra ihany fa Andriamanitra tokana Mpamorona izao tontolo izao nahary ny tany sy ny lanitra. Nefa mba tsy hanafintohinana ny mpitondra dia nandoa hetra tahaka ny olona rehetra Jesosy, Ilay Zanak’ Andriamanitra. Moa tsy efa nampiseho izany fanetren-tena izany koa Jesosy tamin’ny nanekeny ho tonga nofo, ho tonga olona tahaka antsika, ary niara-nonina tamintsika. Volazan’ny Soratra Masina hoe nanaiky ho manampitoviana amin’olombelona, ary nanetry tena ka nanaiky na dia ny fahafatesana aza. Tsy nanaiky ho teraka tao antranon’omby ihany Izy, izay azo oharina amin’ny fahantran’ny fontsika, fa nanaiky iharan’ny fahoriana, anohanana, hetaheta, hatsiaka, eso sy latsa, kapoka, teny ratsy…….NanaikyIzy ho faty teo amin’ny hazofijaliana, izay hazo natao hanalambaraka satria hazo nampijaliana ny jiolahy. Ny fahafatesany teo amin’izany hazo fijalina izany, izay nandatsahany ny rany, no nitondra famonjena ho an’izao tontolo izao, ka izay rehetra manaiky handray izany no mandray ny famelankeloka, dia ny fanadiovan’ny ran’Ilay Zanak’ondry tsy misy kilema ny fahotana rehetra. Nanetri-tena Jesosy mba ahazoan’ny mino Azy famonjena, ary avy eo ny fanaganan’anaka.
Jesosy manaja ny fitondrana nisy atmin’ny fotoana nandalovany teto amin’izao tontolo izao. Niezaka Izy mba tsy isian’ny fanafintohi nana . Ohatra azontsika raisina izany ny amin’ny tokony hankatoavana ny fitondrana, ny fahefana, hanajana izay tokony hajaina. Romana 13:1
Tokony hampieritreritra ny mpitondra sy ny entina izao teny izao: Indro, fa araka ny fahamarinana no anjakan’ny mpanjaka, ary ny lehibe araka ny rariny. Ary hisy lehilahy ho fierena amin’ny rivotra sy fialofana amin’ny ranonoram-baratra; ho ranovelona amin’ny tany karankaina izy, ho alo-batolampy lehibe amin’ny tany mahana. Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetr’andriana, ary ny mpifetsy tsy tsy holazaina hoe mahafoy be. Na ny olona tsirairay, na ny mpitondra izay manana an’i Jesosy ho fialofana dia ho tanteraka aminy tokoa izany Teny izany.
Eto i Simona petera izay niaraka tamin’i Jesosy dia voaantok’i Jesosy hatramin’ny hetra tokony ho anjaran’i Petera. Hain’i Jesosy na dia ny manome antsika vola andoavana ny adidin-tsika ara-panjakana aza.
Mampiseho ny maha-Andriamanitra Azy eto Jesosy, fa i Petera mba ahazoana ny vola andoavana ny hetra aza dia nasain’i Jesosy nanjono (fa tsy nanarato), ary izay trondro azo voalohany no analana ny vola hetra ho azy roa (mahagaga fa tena izay sahaza ho an’izany). Mampiseho koa izany fa ampy ho an’izay mialoka amin’i Jesosy Kristy ny fiantoahany ny momba azy rehetra.
Mitarika antsika ho amin’ny fanetren-tena sy fankatoavana koa izao teny izao.
Jesosy Kristy anie hampahery antsika!
Feon’ny Filazantsara‘Manambara an’I Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’tél 22 210 42 – 034 01 078 23 – 032 43 968 53
Publié parfilazantsaramada novembre 9, 2012 novembre 9, 2012 Publié dansUncategorized